Steve Hanks dia nandao antsika tamin'ity taona 2015 ity, fanomezam-boninahitra | Famoronana an-tserasera
Ny fikarohana hyperrealism amin'ny loko rano nataon'i Steve Hanks
Miaraka amin'ny volon-dranon'i Steve Hanks dia mandroso amin'izay mety hisy isika antsoina hoe hyperrealistic saingy somary latsaka lavitra amin'io famaritana io izy io.
Tsy midika izany fa tsy te-hametraka ny fikasany rehetra ny mpanakanto, fa afaka manatona akaiky kokoa ny famaritana azy isika amin'ny sary hosodoko azo tanterahina kokoa, satria ny tena zava-misy dia antsoina hoe diplaoma saika mahatratra ny fanitarana ary ny fahasarotana afaka manavaka ny asa amin'ny zavatra tena izy.
Ny ankamaroan'ny sangan'asany dia manana kalitao tena avo lenta ary nolokoina tamin'ny loko rano, izay efa sarotra, ary mitady an'io hyperrealism, izay hita amin'ny ankamaroan'ny sanganasa bebe kokoa noho ny hafa, dia fikasana avy amin'ity mpanao hosodoko ity izay nandao antsika marina izy tamin'ity taona 2015 ity.
Noho izay ataontsika karazana fanomezam-boninahitra amina accent apetraka amin'ny maodely vehivavy sy amin'ny zaza mbola tanora raha manana an'io halo majika sy olombelona mandalo eo an-dohany io foana izy ireo.
Fotoana faniriana sy iray manontolo sakafo matsiro sy fitiavana ny fiainana andavanandro amin'ny fotoana sasany izay mitarika antsika amin'ny asa lehibe iray manontolo. Noho io antony io dia hitondranay ny ankamaroan'ny sary hosodokany amin'ireto andalana ireto ianao mba hahagaga anao ny zavatra voalaza hatreto.
Azonao atao ny mitsidika ny tranonkalany stevehanksartwork.com ary makà fotoana kely hankanesana any mankafy ny sasany amin'ny sangan'asany ankoatry ny fahafahanao mahazo sasany, izay araka ny nolazaiko, dia manana accent amin'ny hatsaran'ny vehivavy sy io endrika maha-vehivavy mampihetsi-po io.
Mpanoratra nandao antsika, fa iza ny asany mbola miafina eto mba hanomezana aingam-panahy ireo mpanakanto sy mpanao hosodoko amin'ny ho avy ary amin'ny alàlan'ny watercolor dia azo atao ny manana teknika tsara tarehy hiezahana haka ny zava-misy izay manodidina antsika isan'andro.
Mpanakanto iray hafa miaraka amin'i a fifanarahana lehibe amin'ny watercolor ato amin'ity fidirana ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » mpanakanto » Ny fikarohana hyperrealism amin'ny loko rano nataon'i Steve Hanks
'Feon'ny fanahy ny mozika', namboarina tamin'ny Quilling Paper na Filigree Paper
Iza ireo mpamorona ny logo malaza indrindra?